Binance Coin (BNB): Ny mariky ny fifanakalozana crypto lehibe indrindra manerantany - Cazoo
Home » Home » Binance Coin (BNB): Ny mariky ny fifanakalozana crypto lehibe indrindra manerantany
tenifototra: BEP, Binance, bola, Binance DEX, Tolo-kevitra momba ny evolisiona Binance, Binance Launchpad, andian-tsoratra Chain, BNB, BNB Coin Burn, DEX, Launchpad, Stablecoin fiat
Fotoana famakiana: 10 minuti
Binance mitarika amin'ny lafiny maro izy io. Ho fanampin'ny fanitarana azy ireo eo amin'ny tsena, dia nanitatra ny fivelaran'ilay protokolka ihany koa izy ireo tamin'ny fampidirana ny faritany Binance teratany, BNB Binance Coin, amin'ity taona 2017 lasa lavitra ity.
Inona no atao hoe Binance Coin?
Binance Coin (BNB) dia zavatra maro. Fambara ilaina izay ampiasaina amin'ny varotra crypto, protokolom-pandrosoana hamoronana dApps ary hamoahana mari-pamantarana, vola "valisoa" izay mandrisika ny HODL roa (mitazona crypto nefa tsy mivarotra azy) ary mivarotra azy mihitsy aza. Ny fananganan-jaza amin'ny BNB dia mitombo amin'ny taha mitovy amin'ny Exchange ihany.
Mety hisy ve ny fihenan'ity fitomboana ity ary ho lasa tsy misy fampiasana firy ny BNB? Amin'ity lahatsoratra Binance coin review ity dia hiezaka hampianatra anao momba izany aho. Hodinihintsika ihany koa ny mety ho vidin'ny BNB maharitra sy ny vinavinan'ny fitomboana.
Inona no atao hoe Binance?
Inona ny Binance Coin (BNB)?
Ahoana ny fomba fiasan'ny BNB?
Tantaran'ny vidin'ny BNB
Fifanakalozana sy fitazonana (conservation) an'ny BNB
Fampivoarana ny rojo Binance
Drafitra ho avy ho an'ny Binance Coin
Alohan'ny hanomezanay hevitra anao momba ny inona ilay farantsakely Binance dia andao jerena haingana ny Exchange izay namoahana azy. Binance no fifanakalozana cryptocurrency lehibe indrindra eto an-tany amin'izao fotoana izao, miaraka amin'ny habetsahan'ny varotra saika 1 miliara dolara isan'andro. Raha heverintsika fa teo afovoan'ny taona 2017 vao teraka .. tamin'ny 14 Jolay 2017 mba ho marimarina kokoa. Misoratra anarana amin'ny Binance maimaim-poana ianao, ary azonao atao izany avy amin'ity rohy ity hahazoana ny Fihenam-bidy 20% amin'ny kaomisiona, mandrakizay.
Binance Coins (Binance Coin) dia mari-pamantarana ampiasaina amin'ny sehatra Binance, ka na dia amidy eny an-tsena aza izy ireo ary miovaova ny sandany dia nentim-paharazana izay heverin'ny olona ho vola rehetra, toy ny Euro na Bitcoin. Marefo be ny fampiasana azy, tsy kisendrasendra ny fiakaran'ny vidiny.
Loharano: Blog Binance
Binance Coin dia iray amin'ny maro altcoin, ary rehefa noforonina dia nifototra tamin'ny fenitra ERC-20, amin'ny fampiasana ny Tambajotra Ethereum sy ny blockchain. Tokony hotadidina izy io, satria midika izany fa ny farantsakely dia manaraka ny lalàna napetraky ny fiarahamonina mba hifehezana ny blockchain Ethereum ihany koa. Ny tena zava-dehibe kokoa dia mamela ny Binance Coin handray soa amin'ny fitoniana sy fiarovana fa ny blockchain sy ny tambajotra Ethereum dia namorona rehefa nandeha ny fotoana. Tsy mila miahiahy momba ny volanao halaina amin'ny fanafihana sasany ianao satria voaaro izy ireo, miorina amin'ny Ethereum.
Niova ny zava-drehetra tamin'ny aprily 2019, rehefa Binance dia namindra ny BNB ho any aminy mainnet. Tamin'izany fotoana izany dia nandoro token 5 tapitrisa ERB-20 BNB ihany koa izy ireo ary nanolotra mari-pamantarana marika BNB BEP-2 mitovy amin'ny valizy.
Tamin'izany fotoana izany dia namporisika ny mpampiasa azy i Binance hanova ny mari-pamantarana BNB ERC-20 ho lasa famantarana BEP-2 teratany, saingy amin'izao fotoana izao dia mbola manohana ny mari-pamantarana ERC-20 i Binance ary mbola afaka mamadika azy ireo ho token BEP ireo mpampiasa. 2, na dia tsy izany aza. azo atao intsony ny misintona ny mari-pamantarana ERC-20.
Ny Binance's Blockchain koa dia malefaka be ihany: mamorona mari-pamantarana vaovao izy io hikajiana nomerika ny fananana efa lasa, mandefa, mandray, mint na mandoro, mampangatsiaka na manafoana ireo mari-pamantarana.
Azonao atao ihany koa ny mijery ny tsena DEX hanamafisana ny vidiny sy ny asan'ny tsena amin'ny fananana sasany, hizaha ny tantaran'ny fifanakalozana sy ny sakana amin'ny blockchain, amin'ny alàlan'ny Binance Chain Explorer.
Tsy lazaina intsony fa afaka mitrandraka angona Binance Chain hafa ianao amin'ny alàlan'ny API node feno, mamolavola fitaovana sy rindranasa hanampiana ireo mpampiasa hampiasa ny Binance Chain sy Binance DEX ary, mazava ho azy, mandefa sy mandray mari-pamantarana BNB.
Ny Binance Chain dia mampiasa kinova novaina tamin'ny marimaritra iraisana Tendermint BFT. Tendermint dia noforonina hampiasaina ao amin'ny Tambajotra Cosmos ary mampiasa maritrano modular hanatanterahana tanjona maromaro, ao anatin'izany ny fanomezana tambajotram-pifandraisana sy haavon'ny marimaritra iraisana amin'ny blockchain, toy ny sehatra iray ahafahana manangana rindram-pahefana itsinjaram-pahefana samihafa.
Ny tanjona lehibe amin'ny famolavolana ny Binance Chain dia:
Tsy misy fitazomana vola: mitazona ny fifehezana ny lakileny manokana sy ny volany ny mpivarotra.
Fampisehoana avo: latency ambany, avo throughput (ny fatran'ny bandwidth refesina) ho an'ny mpampiasa lehibe sy ny varotra avo lenta. Mikendry fotoana 1 segondra isaky ny sakana, miaraka amin'ny fanamafisana 1 an'ny ivalozana (ny antoka fa tsy hovaina ny fifanakalozana).
Mora: na amin'ny kaomisiona na amin'ny vidim-bola.
Traikefa tsotra an'ny mpampiasa: sariaka toa an'i Binance.com.
Varotra ara-drariny: ahenao araka izay tratra ny fihazakazahana mialoha.
Azo ovaina: mahay mampivoatra ny fanatsarana hatrany ny teknolojia, ny maritrano ary ny hevitra.
Tsy ratsy ny manontany hoe inona no ilana an'i Binance Coin, satria tsy vola izany. Amin'ny maha tokana ampiasaina amin'ny sehatra Binance dia manana tanjona sarobidy tokoa izy io. Tsarovy fa i Binance dia mitaky sarany amin'ny varotra isaky ny raharaham-barotra ataonao.
Ahoana ny fijanonana amin'ny fandoavana ny saram-pifanakalozana? Miaraka amin'ny Binance Coin azonao atao, satria io no ampiasaina, handoa kaomisiona amin'ny fifanakalozana Binance.
Raha tokony handoa sarany $ 1 isaky ny $ 1.000 izay varotrao ianao (izay tena afaka manampy ary lasa vola tsy azo eritreretina ho an'ny mpivarotra mavitrika), azonao atao ny mampiasa vola madinika Binance fotsiny hanefana ny sarany. Izany dia mahatonga an'i Binance Coins tena ilaina sy sarobidy ho an'ireo mpivarotra amin'ny fifanakalozana Binance.
Ity indrindra ny fomba fiasany: Binance dia hampihena ny saram-barotra ho an'ireo maniry hampiasa vola madinika Binance mandritra ny fifanakalozana varotra, mandritra ny dimy taona voalohany. Ary misy ny rafitra komisiona ambaratonga mihetsiketsika, Ka amin'ny taona voalohany dia afaka mahazo fihenam-bidy 50% amin'ny kaomisionanao amin'ny alàlan'ny Binance Coin.
Fihenam-bidy amin'ny saram-barotra ho an'ny mpihazona BNB. Loharano: Binance
Ny fihenam-bidy dia antsasaky ny isan-taona, ka amin'ny taona faharoa dia 25% ny fihenam-bidy, amin'ny taona fahatelo dia 12,5%, amin'ny taona fahefatra dia 6,75% ary amin'ny taona fahadimy sy farany dia nesorina ny fihenam-bidy.
Ity fihenam-bidy ity dia isaina ary esorina avy hatrany raha manana farantsa Binance ao amin'ny kitapom-bolanao ianao. Raha tsy te hampiasa ny volanao Binance ianao handrakofana ny sarany dia azonao atao ihany koa ny manafoana ity endri-javatra ity.
Fa…. fa raha mihena hatrany ny fihenam-bidy, tsy misy lanjany ve ny token amin'ny farany?
Rehefa mihamaro ny olona liana amin'ny fifanakalozana Binance dia hitondra lanja bebe kokoa amin'ilay vola izy ireo, fa ireo mpanorina Binance koa dia nahita vahaolana hafa hisorohana ny lanjan'ilay token tsy hihena.
Isaky ny telovolana dia maka 20% amin'ny tombony azony avy amin'ny kaomisiona izy ireo ary mampiasa azy io hividianana vola madinika sy "handoro" na handrava azy ireo.
Ity Burn ity dia efa niseho in-14, niaraka tamin'ny may farany niseho tamin'ny 19 Janoary 2021, ary io no avo indrindra voarakitra an-tsoratra, izay nahitana 3,6 tapitrisa famantarana BNB. Ny faharoa lehibe indrindra dia tamin'ny 15 aprily 2018, rehefa nandoro 2.220.314 XNUMX BNB i Binance.
Amin'ny alàlan'ny fanesorana ireo vola madinika tsy hivezivezy dia manome vola kely sisa tavela i Binance. Mbola hitohy izany mandra-pandringan'ny antsasaky ny famatsiana vola, na 100 tapitrisa BNB.
Amin'ny fandinihana ny tabilao BNB dia ho hitanao fa miakatra ny vidin'ny vola madinika isaky ny misy may (afa-tsy ny voalohany, satria tsy fantatra fa ho avy izany).
Binance mankalaza ny fahamaizana fahavalo. Loharano: Blog Binance
Ny Launchpad dia tolo-kevitra mahaliana iray hafa natombok'i Binance tsy ela akory izay. Ity dia sehatra famoahana token izay solo'i Binance ny Etheruem ICO. Hamela ireo tetikasa vaovao hamoaka mivantana ny mari-pamantarana azy ireo amin'ny Launchpad.
Zava-dehibe koa izany ho an'ny Binance Coin (BNB) satria io dia hampiasaina ho marika teratany amin'ity olana ity. Tahaka ny nampiakaran'ny ICO ETH amin'ny varotra tohanan'ny Ethereum, BNB dia hatakalo ny mari-pamantarana navoakan'ny tetikasa fitadiavam-bola.
Ity teknika ity dia efa nampiasaina tamin'ny fomba mahomby tamin'ny BitTorrent Token (BTT). Nahery vaika ny fangatahana ka vita tao anatin'ny 20 minitra ny fivarotana manontolo. Nisy ihany koa ny fiakarana farany teo amin'ny vidin'ny BNB rehefa fantatra fa misy tetikasa iray hafa hampiasa Launchpad hamoaka ny mari-pamantarana azy: ny tetikasa Fetch.ai. Ity dia fanamafisana bebe kokoa fa ny hetsika manodidina ny Launchpad dia mety hampiakatra ny fitakiana ny vola BNB: satria mihamaro ny mpampiasa te hanana tànana amin'ny BNB hampiasa vola amin'ny Fetch.ai, dia nanohy nividy ny BNB izy ireo hanao izany.
Na dia fifanakalozana afovoany lehibe aza i Binance dia nanaiky sy nahatanteraka ny fangatahan'ny mpivarotra izy ireo ho an'ny fifanakalozana itsinjaram-pahefana. Amin'ity lafiny ity dia nanangana ny azy ireo izy ireo Binance DEX.
Raha mbola tsy fantatrao, ny fifanakalozana itsinjaram-pahefana (DEX) dia fifanakalozam-bola cryptocurrency mamela ny fifanakalozana mpivarotra eo amin'ny samy mpandray anjara. Tsy ilaina ny mandefa vola crypto any amin'ny kitapom-bolam-bola amin'ny fifanakalozana, ary mametraka baiko.
Tombontsoa amin'ny fampiasana Binance DEX. Loharano: Binance.org
Binance DEX valin'i Binance amin'ity fanontaniana ity.
Izy io dia natsangana eo ambonin'ny Binance Chain ary ny fananana teratany izay manome fahefana ny fifanakalozana dia miharihary fa ny famantarana BNB. Ny sasany amin'ireo fiasa hafa an'ny Binance DEX dia misy ny fahafaha-manao:
hamoaka famantarana vaovao
mandefasa marika amina mpampiasa hafa mivantana ao amin'ny DEX
mandoro famantarana raha ilaina
ampangatsiaho ny mari-pamantarana sasany ary atsoniho avy eo
manolotra mpivady varotra vaovao
Mividiana BNB ON DEX BINANCE
Hatramin'ny androany martsa 2021, ny BNB dia ny cryptocurrency fahatelo lehibe indrindra amin'ny fatran'ny tsena miaraka amina tsena 41,53 miliara dolara. Ny ambany indrindra amin'ny $ 0,096109 ho an'ny farantsakely dia nitranga tsy ela taorian'ny nanombohany tamin'ny 1 Aogositra 2017. Ny haavon'ny fotoana rehetra dia vao haingana kokoa, ary ny BNB dia nahatratra $ 333 tamin'ny 20 febroary. Tsy ratsy ho an'izay mino vola.
Fahombiazan'ny vidin'ny BNB. Manisa: coinmarketcap
Zava-dehibe ihany koa ny manamarika fa ny mavitrika amin'ny vidin'ny BNB dia tsy mitovy amin'ny maro hafa altcoin miaraka amin'ny kapitalin'ny tsena mitovy amin'izany. Voalohany indrindra dia tsy maintsy heverina fa ny fandoroana vola tsy miova (fandoroana, fanimbana) dia mampihena ny famatsiana (amin'ny hevitry ny fisian'ny) an'ny BNB eny an-tsena. Ary noho izany ny fitomboan'ny tinady ..
Ireo lafin-javatra roa ireo no mahatonga ny BNB tsy dia miova firy mandritra ny taona maro noho ny vola hafa. Ankoatr'izay, tombotsoan'i Binance foana ny fananana vola teratany tsy miovaova ampiasaina hivarotra. Izany dia nilaza fa vao haingana izy ireo no namoaka ny kinalan'ny fiat stablecoins manokana - andao hiresaka momba ny dublecoins Binance USD sy Binance GBP.
Hitanay teo amin'ny coinmarketcap izany: ny habetsahana sy ny fihoaram-pefy an'ny Binance Coin (BNB) dia avo dia avo. Toy izany koa, ny ankamaroan'ity boky ity dia mitranga amin'ny Binance amin'ny alàlan'ny mpivady Tether (USDT) sy Bitcoin. Na izany aza, ny BNB dia voatanisa ihany koa amin'ny fifanakalozana hafa izay manome liquidity bebe kokoa sy vidiny tsara kokoa, toy ny P2PB2B, Coinsbit, MXC, sns.
Ny BNB dia voatahiry ao anaty kitapom-bola (poketra) tahaka ny cryptocurrency rehetra. Talohan'izay dia azo tehirizina ao anaty poketra mifanentana amin'ny ERC-20 izy ireo, saingy manomboka amin'ny tsimbadika Aprily 2019 mankany amin'ny mari-pamantarana mainnet sy BEP-2 dia takiana poketra mifanentana BEP-2.
Soa ihany, misy portfolio maro manohana ny BNB. Raha mila filaminana faran'izay betsaka ianao dia afaka misafidy kitapom-batsy toy ny Ledger na Trezor. Raha tianao ny poketra finday dia azonao ampiasaina ny Coinomi, BRD, Trust Wallet na Atomic Wallet. Jaxx Liberty koa dia manohana ny BNB, toy ny poketra hafa vitsivitsy ihany.
Satria i Binance Chain dia tetik'asa misokatra iray ahafahanay mijery mivantana amin'ireo toerana anaovany kaody mba hahalalantsika tsara ireo kavina sy fivoarana mitranga.
Ny kaomisiona kaody (ny kaody fanavaozana kaody) dia baraometatra lehibe hamaritana tsara hoe ohatrinona ny habetsaky ny prototype-level atao. Ireo no komisiona mavitrika ao amin'ny Binance Chain ao amin'ny GitHub tato anatin'ny 3 taona.
Toa tontolo iainana ekena tsara tarehy io.
Zava-dehibe iray hafa manamarika ihany koa ny maha mavitrika ny Repoblika Binance Evolution Proposal (BEP) aseho etsy ambany.
I BEP izy ireo dia mitovy amin'ny Binance Chain amin'ireo tolo-kevitra momba ny fanatsarana Bitcoin ary anisan'ireo zavatra tian ny fiaraha-monina ho fampiharana.
Misy be dia be ny BEP eo am-piandrasana. Mazava ho azy, ny tontolo iainana BNB midadasika koa dia manana tondrozotra matanjaka ho an'ny fandraisana andraikitra. Andao hojerentsika ny sasany amin'izy ireo.
Ny Binance Coin dia kely fotsiny noho ny marika nampiasaina mafy handoavana ny saram-barotra rehefa nisy izy io, na dia misy aza ny milaza fa ny tombantombana amin'ny tsena malalaka dia mahatonga azy io ho vola nomerika amin'ny zony manokana.
Tsy ho izany foana anefa no izy, satria ny ekipa Binance dia mikasa ny hanitatra be ny faritry ny fampiasana ny farantsakely BNB. Tianay be koa izany raha jerena fa mitohy miakatra ny vidin'ny BNB, ary satria ny mpanjifa mitombo hatrany ao Binance dia te hampiasa ilay farantsakely mba hitsitsiana ny saram-barotra.
Ny Binance Coin dia efa azo ampiasaina hampiasa vola amin'ny ICO nampiantranoina tamin'ny sehatra Binance Launchpad, izay manolotra fomba an'ireo mpihazona BNB hamerina ny volany. Ireo ICO ireo dia nahitana ny Mofo, BitTorrent, Elrond, WINk, Kava, ary tetik'asa blockchain maro hafa. Ny fampiasam-bola BNB Binance Launchpad dia nahomby hatreto, izay manome tombony fanampiny ny token BNB.
Tetikasa mampiasa Binance Coin
Araka io lojika io, satria miha maro ny tsena itsinjaram-pahefana mifanakalo varotra vola madinika vaovao, mety ho hitanao ny fitomboan'ny fangatahana amin'ny fitondrana BNB azy ireo.
Amin'izao fotoana izao ny fampiasana hafa an'ny BNB handoavana ny saran-dia amin'ny mpivarotra voafantina any Aostralia, handoa ny volavolan-dalàna momba ny carte de crédit Crypto.com, mividy fanomezana virtoaly eo amin'ny sehatra Mithril, mandoa na inona na inona amin'ireo magazay ampiasainy. Ny rafitra XPOS PundiX ary maro hafa mampiasa. Marina, ny ankamaroan'izy ireo dia mifamatotra amin'ny sehatra tsirairay, fa rehefa mihabetsaka ny fampiasana dia hitombo ihany koa ny tontolo iainana BNB.
Raha mbola mitombo ny Binance ary manampy endri-javatra vaovao, dia azo antoka fa hitombo ny isan'ny zavatra azo atao amin'ny vola madinika Binance.
Tsy tokony hohadinoina fa efa azo atao ny mifanakalo amin'ny BNB amin'ny maha speculateur anao, manandrana miditra amin'ny vidiny ambany ary avy eo mivarotra ny token amin'ny vidiny avo kokoa, toy ny efa fanaon'ny maro ihany! Izay nanomboka kelikely dia efa nahita vola be. Tandremo tsara hiditra izao fa lava loatra ilay sombin-javatra.
Tsy azo lavina fa ny anjaran'ilay farantsakely Binance dia mifamatotra akaiky amin'ny fahombiazan'ny Binance amin'ny endrika Exchange. Raha manala tsikelikely ny fihenam-bidy amin'ny vidin'ny varotra amin'ny alàlan'ny fampiasana ny Binance Coin i Binance, dia mahita fomba hafa ihany koa hanaovana an'io vola io ho sarobidy kokoa.
Toy ny fandoroana, fandoroana, fanimbana ny famatsiana vola madinika ary famoronana fifanakalozam-bola itsinjaram-pahefana izay mampiasa ny faribola Binance ho toy ny vola naterany. Ny fampiasana amin'ny ho avy ny BNBs dia hahatonga azy io ho ilaina bebe kokoa ary handrisika ny fangatahana ilay vola.
Mazava ho azy fa miankina amin'ny fahombiazan'ny Binance amin'ny fifanakalozam-bola ny fahafaha-mitombo ny sandan'ny Binance coin. Binance dia tsy mahatratra fahombiazana, manamafy izany.
Lahatsoratra talohaAhoana ny fanaovana Margin Trading (miaraka amin'ny LEVA) amin'ny Binance?
Lahatsoratra manarakaFihenam-bidy amin'ny sarany Binance